Deblistering Machine njalo-60N - China Halo Pharmatech Co., Ltd
Njl-60N kukho izixhobo ngumenzi wokuqala apho ungathatha njengezingxobo, amacwecwe kunye nabanye ngokukhawuleza esuka Imiqulu blister yi extrusion. Le mishini eziluncedo ezizodwa ngesantya esiphezulu, hetiseka kwipilisi-ukuthatha, balo ukuba iipilisi. Yinto izixhobo ofanayo kwipilisi-ukuthatha ezivenkileni. Kwiintlobo ezahlukeneyo Aluminium Plastic Board (APB), njl-60N kufakwa nezakhiwo nokuziqhelanisa ukusingatha ngokulula. Xa kuthelekiswa nezinye oomatshini ezifanayo, njalo series zezona umatshini ipilisi-ukuthatha ezininzi ezilungele kumashishini amakhulu amayeza yokuvelisa, ingakumbi ngenxa iingxaki zabo imveliso blister.
Njl-60N Umshini semi-automatic, lusidla ngesandla yaye 60 iiPC / min njengoko isantya yokusebenza ubuninzi. Uya kusebenza phantse lonke uhlobo pack blister.
Previous: Deblistering Machine njalo-60A
Okulandelayo: Deblistering Machine njalo-120A